के तपाईलाई थाहा छ ? संसारमा सबैभन्दा पहिले कसलाई र कसरी एड्स भएको थियो ? - RuruNetwork
के तपाईलाई थाहा छ ? संसारमा सबैभन्दा पहिले कसलाई र कसरी एड्स भएको थियो ?
सुन्दर कसजू ६ माघ २०७४, शनिबार १६:०० मा प्रकाशित
१ डिसेम्बरको दिन विश्वभरी विश्व एड्स दिवस मनाइने गरिन्छ । १९८८ मा यो दिन मानिसहरु बीच एड्स प्रतिको जागरूकता फैलाउनको लागि मनाइने गरिन्छ । यस पश्चात पूरा संसारले यस खतरनाक रोगको बारेमा थाहा पाउन सकेको थियो । तर एउटा यस्तो कुरा छ जसको बारेमा आज पनि संसारलाई थाहा नहुन सक्छ । वास्तबमा यो कुरा केहि मानिसहरुलाई मात्र थाहा छ कि सबैभन्दा पहिले कुन व्यक्तिलाई एड्स भएको थियो र कसरी ? सामान्यतय मानिसहरुले आफ्नै प्रतिक्रियामा विभिन्न कुराहरुको विश्लेषण गर्ने गरेका छन्। तर यौन सम्पर्कबाट मानिसहरुमा एड्स सरेको भन्ने हल्ला र गलत सूचना अहिले पनि समाजमा ताजा नै रहेको छ ।
साथै एड्स हुनुको वास्तविक कुरा भने अर्कै रहेको छ । यस बिषयलाई लिएर गरिएको एक अनुसन्धान अनुसार एड्स चिम्पान्जीको कारणले गर्दा भएको हो । सन १९०८ मा कैमरूनको जंगलमा एक घायल चिम्पान्जीले एक शिकारीलाई चिथरेको र टोकेको थियो। र त्यस शिकारीको शरीरमा गहिरो घाउ लागेको थियो । यसै समयमा घायल चिम्पान्जीको रगत शिकारीको शरीरमा मिसिएर इन्फेक्सनको संक्रमण भएको थियो । र यसैको कारणले भाइरस पुरै दुनियामा फैलिएको छ । त्यसैले उक्त व्यक्तिलाई दोषी मानिएको छ ।
१९८० मा गैटन दुगास नामका यस व्यक्तिको बारेमा पुरै संसारलाई थाहा भएको थियो । गैटन पेशाले एक क्यानेडियन फ्लाइट अटेन्डेन्ट गएका थिए । सूचना अनुसार उनि अमेरिकाको कैयौं व्यक्तिलाई इन्फेक्ट गर्नका लागि जानीजानी सम्बन्ध बनाउने गर्दथे । त्यसैले उनलाई पेशेन्ट जिरो को नाम दिईएको थियो ।
पाल्पाको अर्गलिमा अदभुत गुफा भेटियो।
रुरु फ्रेन्ड्स क्लब, रिडि द्वारा गाँउपालिका लाई खाद्यान्न हस्तान्तरण
रिडिका होटल ब्यबसायी शैलेन्द्र दर्लामी द्वारा निशुल्क खानाको ब्यबस्था
रुरु गाँउपालिका द्वारा आजबाट रिडिमा २५ शैयाको अस्थाइ क्वारेन्टाइन सुरु
रिडिका तीन वटा बिद्यालयहरु मर्ज गरि नया स्वरुपको नमुना बिद्यालय गठन गरिने।
रुरु गाउँपालिकामा पहिलोपल्ट २ जनामा कोरोना पुष्टि।
गुल्मी शान्तिपुरमा आगलागी हुंँदा एकको मृत्यु, ३ घाइते
स्थानियको प्रयासमा रिडिमा अलपत्र झण्डै १०० यात्रीहरुको उद्धार
बलेटक्सारबासी चार दिनदेखि खोलाको लेदो पानी पिउन विवश
रिडिमा आइसोलेसन राख्ने कार्यको स्थानिय द्वारा ससक्त प्रतिरोध